အဓမ္မပြုကျင့်မှု – Eleven Media Group
နေအိမ်တွင် ညအိပ်တည်းခိုသူ ဧည့်သည်က ခြောက်နှစ်ခွဲအရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်မှု မြ၀တီမြို့တွင် ဖြစ်ပွား
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်တွင် ခြောက်နှစ်ခွဲအရွယ် သမီးငယ်တစ်ဦးကို ညအိပ်တည်းခိုသူ မိတ်ဆွေက ပြန်ပြောရင် ရောင်းစားမယ်၊ အိမ်ကိုမီးရှို့ပစ်မယ်ဟု ခြိမ်းခြောက်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့မှုတစ်ခု သြဂုတ် ၁၀ ရက်ညက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြ၀တီမြို့အမှတ် (၄) ရပ်ကွက် ၀ိဝေကာ ရာမကျောင်းလမ်းနေ ကို …. မိသားစု နေအိမ်သို့ လွန်ခဲ့သော သုံးရက်က ခင်မင်သိကျွမ်းခဲ့သော မင်းကျော်ဆိုသူကို သြဂုတ် ၁၀ ရက်က နေအိမ်တွင် ညအိပ်စေခဲ့ကြောင်း၊ သြဂုတ် ၁၁ ရက်တွင် ကို …. က ဧည့်သည် မင်းကျော်အား တောရကျောင်းလမ်းရှိ အလုပ်ရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၁၁ ရက် နံနက်တွင် ကို …. ၏ ဇနီးသည် နေအိမ်၌ ထမင်းကြော်နေစဉ် ခြောက်နှစ်ခွဲအရွယ် သမီးငယ် ရောက်ရှိလာပြီး ည ၁၂ နာရီခန့်က ဧည့်သည်မင်းကျော်က ၎င်းအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့၍ မိန်မကိုယ် နာကျင်နေကြောင်း ပြောပြသဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက နံနက် ၁၀ နာရီခွဲတွင် မြ၀တီမြို့မရဲစခန်းသို့ သွားရောက် တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြ၀တီမြို့မရဲ စခန်းက မိန်းကလေးငယ် ၏မိခင်ဖြစ်သူအား စစ်ဆေးရာ ၎င်း၏ခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် ဧည့်သည် မင်းကျော်ဆိုသူအား သမီးငယ်နှစ်ဦး (ခြောက်နှစ်ခွဲ၊ တစ်နှစ်ခွဲ) ၏ ခြင်ထောင်အနီးတွင် ခြင်ဆေးခွေထွန်းပေးပြီး အိပ်စေခဲ့ကြောင်း၊ ည ၁၂ နာရီခန့်တွင် ဧည့်သည်က ခြောက်နှစ်ခွဲသမီးငယ်၏ မိန်းမကိုယ်အား မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်ပြီး တန်ဆာနှင့် ထိုးသည့်အတွက် နာကျင်သော်လည်း မိခင်နှင့် ဖခင်အား ပြောလျှင် ရောင်းစားမည်၊ အိမ်မီးရှို့မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုသည်ကို သမီးငယ်၏ ပြောပြချက်အရသိရပြီး တိုင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ခြောက်နှစ်ခွဲအရွယ်ရှိ မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့သူ မင်းကျော် ( ၃၂ နှစ်) (ဘ) ဦးအောင်သန်း၊ အိုးဖိုစုကျေးရွာ လက်ပံတန်းမြို့နယ်နေသူအား မြ၀တီမြို့မ ရဲစခန်းက (ပ)၆ပ၈/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီး ၃၇၆ ဖြင့် အရေးယူ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on နေအိမ်တွင် ညအိပ်တည်းခိုသူ ဧည့်သည်က ခြောက်နှစ်ခွဲအရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်မှု မြ၀တီမြို့တွင် ဖြစ်ပွား
မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို ဖုန်းဝယ်ပေးမည်ဟု လိမ်ပြော၍ အမျိုးသားလေးဦးက အဓမ္မပြုကျင့်မှု တောင်ဒဂုံတွင် ဖြစ်ပွား
Posted on July 26, 2018 by ပြည့်ဖြိုးအောင်
အသက် ၁၄ နှစ်ခွဲအရွယ် မိန်းကလေးကို ဖုန်းဝယ်ပေးမည်ဟု လိမ်ပြောပြီး အငှားယာဉ်ဖြင့် ခေါ်ဆောင်၍ အမျိုးသားလေးဦးက သားမယားပြုကျင့်မှု တောင်ဒဂုံမြို့နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဇူလိုင် ၂၅ ရက် ညနေပိုင်းက ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့မရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။ အဆိုပါ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ ဇူလိုင် ၂၃ ရက် ည ၈ နာရီတွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ မ…. သည် နေအိမ်မှ တစ်ဦးတည်းအပြင်ထွက်လာစဉ် လူငယ်နှစ်ဦးနှင့်အတူ အအေးဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် စကားပြောကြစဉ် မ….. က လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံး လိုချင်သည်ဟု လူငယ်နှစ်ဦးကို ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် လူငယ်နှစ်ဦးက ဖုန်းဝယ်ပေးမည်ဟု မက်လုံးပေး၍လိမ်လည်ပြောဆိုကာ မ….အား အငှားယာဉ်ဖြင့် ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းနောက် အမည်မသိ အမျိုးသားနှစ်ဦး ထပ်မံရောက်လာပြီး မ…ကို သားမယားအဖြစ် ထပ်မံပြုကျင့်ခဲ့ပြီးနောက် ဇူလိုင်၂၄ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် အငှားယာဉ်ဖြင့် ပြန်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း တရားလိုဖြစ်သူ၏ တိုင်တန်းချက်အရ သိရသည်။
အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၄ နှစ်ခွဲအရွယ် မိန်းကလေးကို သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့သည့် အမျိုးသား လေးဦးအနက်မှ သံသယရှိသူများဖြစ်သည့် ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ၁၈ ရပ်ကွက်နေ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် သီဟဆိုသူနှင့် အသက် ၂၀ နှစ်အရွယ် စာကလေး (ခ) အောင်နိုင်ဆိုသူတို့ကို ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အမှုဖြစ်စဉ်မှ ကျူးလွန်သူလေးဦးကို ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့မရဲစခန်းတွင် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆/၃၆၃/၁၁၄ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ကျန်နှစ်ဦး ဖမ်းဆီးရမိရေး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှ စုံစမ်းသိရသည်။
Posted in NewsTagged အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို ဖုန်းဝယ်ပေးမည်ဟု လိမ်ပြော၍ အမျိုးသားလေးဦးက အဓမ္မပြုကျင့်မှု တောင်ဒဂုံတွင် ဖြစ်ပွား
အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် သရုပ်ဆောင် သီဟတင်စိုးအား အမှုဖွင့်ထားသည့် တရားလို အိမ်အကူအမျိုးသမီးမှာ ပဲခူးမြို့တွင်လည်း အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို အမှုဖွင့်ထားဟုဆို
သရုပ်ဆောင် သီဟတင်စိုးက သားမယား ပြုကျင့်သည်ဟုဆိုကာ ရန်ကုန်မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ သုဝဏ္ဍနယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့််ထားသော အိမ်အကူအမျိုးသမီးမှာ ပဲခူးမြို့တွင်လည်း ၎င်းကို အခြားအမျိုးသားတစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်သည်ဟုဆိုပြီး အမှုဖွင့်ထားကြောင်း ဇူလိုင် ၁၇ ရက်တွင် ပဲခူးမြို့၊ အမှတ် (၃) ရဲစခန်းက စုံစမ်းသိရှိရသည်။
အဆိုပါ အိမ်အကူအမျိုးသမီး ဒေါ်ခင်မာမြင့် (၄၀) နှစ်မှာ ပဲခူးမြို့ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးက သားမယား ပြုကျင့်သည်ဟုဆိုပြီး၊ ပဲခူး အမှတ် (၃) ရဲစခန်း၌ ဒေါ်ခင်မာညို (၄၀) နှစ် အမည်၊ နေရပ်တွင် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊ သူဌေးကုန်းကျေးရွာ လိပ်စာဖြင့် တရားလိုပြုလုပ်ကာ တိုင်တန်း အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
“သူတို့ ဖြစ်တာက ဒီနှစ် မတ်လ ၁ ရက်ကပါ။ အမှုဖွင့်တာက မတ်လ ၃ ရက်နေ့ပါ။ အမှုလာဖွင့်တဲ့ အမျိုးသမီးက အခု သီဟတင်စိုးကို အမှုဖွင့်ထားတဲ့ အမျိုးသမီးဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဒီမှာ ဖွင့်တာကတော့ အိမ်ရှင်ကို ဖွင့်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်ရှင်ရဲ့ လူယုံအလုပ်သမားကို ဖွင့်တာပါ။ အိမ်ရှင်တွေ ရန်ကုန်သွားတော့ ဥသာမြို့သစ် ရပ်ကွက်ကြီးက ဂိုထောင်မှာ အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကို ထားခဲ့တာ။ ဂိုထောင်ဆိုပေမယ့် အလုံပိတ် ဂိုထောင်သီးသန့် မဟုတ်ဘူး၊ ရုံးခန်းတွေ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီမှာ အဓမ္မပြုကျင့်တယ် ဆိုပြီးတော့ အမှုလာဖွင့်တာ ဖြစ်ပါတယ်၊ တိုင်တန်းခံရတဲ့ အမျိုးသားက လက်ရှိ ထောင်ထဲမှာပါ ” ဟု ပဲခူးမြို့ အမှတ် (၃) ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ တိုင်တန်းမှုကို ပဲခူးမြို့၊ အမှတ် (၃) ရဲစခန်းက (ပ) ၁၆၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားပြီး ကျူးလွန်သူဟု ဆိုသော အမျိုးသားကို ဖမ်းဆီးထားကြောင်း သိရသည်။
သီဟတင်စိုးကို အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် တရားလိုပြုလုပ် အမှုဖွင့်သူမှာ ပဲခူးတွင်ရှိစဉ်က မိမိတို့အိမ်မှ လူယုံအလုပ်သမားကို အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့်ပင် တရားလိုပြုလုပ် အမှုဖွင့်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်း ပဲခူးမြို့ ပန်းလှိုင် ၂၁ လမ်းရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်မှ အိမ်ရှင်ဒေါ်ဝင်းမာမြင့်က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းကအိမ်တွင်လာရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး “သူ့ကို သွားခေါ်တာက ဦးဌေးဝင်းဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဆီက သွားခေါ်တာ။ ရန်ကုန်ကပဲ။ သူ့ဆီက သွားခေါ်တုန်းကတော့ သူက ဒီအမျိုးသမီးကတော့ အပျိုကြီး အိမ်ထောင်မရှိဘူး။ နင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် နင်နဲ့အတူ တစ်သက်လုံး နင့်အိမ်မှာ နေသွားမှာဆိုတော့။ ကျွန်မကလည်း သူ့ပုံစံကြည့်ပြီးတော့ ရိုးရိုးပဲဆိုပြီးတော့ ဟုတ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ အိမ်ကိုခေါ်ချလာတာ။ အိမ်ရောက်တော့လည်း သူ့ဟာသူ အေးဆေးပဲဆိုတော့ ဒီလောက်ထိ လုပ်မယ်လို့ မထင်မိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီကိစ္စပေါ်သွားပြီးမှ သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ် ထွက်လာတာပေါ့နော်။ ကျွန်မတို့အိမ်က လူယုံအလုပ်သမားနဲ့ ဘယ်လောက်အထိဖြစ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာတော့ ကျွန်မ မသိဘူး။ သူက တော်တော်သွက်တာပဲ” ဟု ပြောကြားသည်။
ဇူလိုင် ၁၆ ရက်က အမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်္ကန်းကျွန်းစံပြ ဆေးရုံကြီးတွင် ဆေးစစ်ရန် အတွက် ရဲစခန်းသို့ လာရောက်စဉ် အဆိုပါ အိမ်အကူအမျိုးသမီးက ၄င်းမှာ ယခင်က ထိုကဲ့သို့ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသည့် အခြေအနေမျိုး မကြုံဖူးသည့်အတွက် ကြောက်ရွံ့ကြောင်း၊ ၄င်းမှာ အိမ်ထောင်ရှိပြီး သားတစ် ဦးရှိကြောင်းနှင့် စသည့် အကြောင်းအရာများကို မီဒီယာများအား ဖြေကြားခဲ့သည်။
သရုပ်ဆောင် သီဟတင်စိုးမှာ သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်းတွင် ဇူလိုင် ၁၄ ရက်က အိမ်အကူအမျိုးသမီးအား သားမယားပြုကျင့်သည်ဟုဆိုကာ အမှုဖွင့်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး အမှုဖွင့်သည့် အမျိုးသမီးမှာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရေနံချောင်းမြို့နယ်နေ ဒေါ်ခင်မာမြင့် (၄၀) နှစ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းသည် သီဟတင်စိုး၏ နေအိမ်၌ ဇူလိုင် ၅ ရက်တွင် တစ်လလျင် ငွေကျပ် ၁၅၀၀၀၀ ဖြင့် အိမ်အကူအလုပ်ကို လာရောက် လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုသို့ လုပ်ကိုင်နေစဉ် ဇူလိုင် ၁၃ ရက် ညပိုင်းတွင် သရုပ်ဆောင် သီဟတင်စိုးက ၎င်းအခန်းထဲသို့ ရောက်ရှိလာကာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပြီးနောက် သတ်ပစ်မည်ဟုလည်း ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုဆိုကာ သုဝဏ္ဍနယ်မြေရဲစခန်းသို့ သွားရောက်အမှုဖွင့် တိုင်တန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တိုင်တန်းမှုကို သုဝဏ္ဏနယ်မြေရဲစခန်းက (ပ) ၃၈၆/ ၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် အမှုဖွင့်ကာ တရားလိုကို ဇူလိုင် ၁၆ ရက်တွင် သင်္ဃန်းကျွန်း (စံပြ) ဆေးရုံ၌ ဆေးစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, HeadlineTagged သရုပ်ဆောင် သီဟတင်စိုး, အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် သရုပ်ဆောင် သီဟတင်စိုးအား အမှုဖွင့်ထားသည့် တရားလို အိမ်အကူအမျိုးသမီးမှာ ပဲခူးမြို့တွင်လည်း အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြင့် အမျိုးသားတစ်ဦးကို အမှုဖွင့်ထားဟုဆို
တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် ပထွေးဖြစ်သူက ရှစ်နှစ်အရွယ် ဒုတိယတန်းကျောင်းသူအား အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
Posted on June 28, 2018 June 29, 2018 by ဇော်မိုးဦး (မြိတ်)
တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် ပထွေးဖြစ်သူက အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ် ဒုတိယတန်းကျောင်းသူအား အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မြိတ်ခရိုင် တနင်္သာရီမြို့နယ် သိန်ခွန်းကျေးရွာအုပ်စု အမှတ် (၈)ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော ဒေါ်သန်းရီမှာ ဇွန် ၂၇ ရက်က မောတောင်ရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အမှတ် (၈) ကျေးရွာတောင်ဘက် တစ်မိုင်ခန့်ဝေးသော တောင်ယာတဲတွင် နောက်အိမ်ထောင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်သန်းနှင့် သမီးများဖြစ်သော မ— (၈)နှစ် ဒုတိယတန်းကျောင်းသူနှင့် မ—(၅)နှစ် မူကြိုတို့အား ဇွန် ၁၄ ရက်က ထားခဲ့ကာ အမှတ် (၈)ကျေးရွာတွင် ဆန်နှင့် ပစ္စည်းတချို့ဝယ်ရန် သွားရောက်ခဲ့ ပြောကြားသည်။
ပစ္စည်းတချို့ဝယ်ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစဉ် သမီးအကြီးမှာ အိပ်ရာထဲမှမထနိုင်ဘဲ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသောကြောင့် မေးမြန်းရာ သမီးငယ်က ဦးကျော်သန်းက သူ၏ အစ်မအား လိင်ဆက်ဆံနေသည်ကို တွေ့ခဲ့ရသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူအားမေးမြန်းရာ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုသဖြင့် သမီးများအား ခင်ပွန်းမှ ရန်ရှာမည်စိုးရိမ်၍ ရေသွားချိုးမည်ဟုပြောကာ ရေချောင်းတစ်ဖက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာ မေးမြန်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ထိုသို့ မေးမြန်းရာ သမီးအကြီးအိပ်နေစဉ် ဦးကျော်သန်းက ဘောင်းဘီအားချွတ်ကာ ကာမဆက်ဆံခဲ့ကြောင်း၊ မ—မှာ နာကျင်ပြီး အော်ခဲ့ရာ တဲအောက်တွင် ကစားနေသော ညီမဖြစ်သူက တဲပေါ်တက်လာပြီး ဦးကျော်သန်း၏ ကျောကုန်းအား နှစ်ချက်ထုခဲ့သော်လည်း ဦးကျော်သန်းက ဆက်လက်ပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း၊ မ—မှာ နာကျင်လွန်းပြီး ထပ်မံအော်သောအခါမှ ရပ်နားလိုက်ကြောင်း၊ ညီအစ်မ နှစ်ဦးစလုံးကိုလည်း အမေဖြစ်သူကိုပြန်ပြောပါက သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အိမ်နီးချင်းဖြစ်သူ ဒေါ်အေးရီအား ပြောပြအကြံဥာဏ်တောင်းနေစဉ် အရန်သွားဖွားဆရာမ ဒေါ်လွမ်းပိုရောက်ရှိလာပြီး တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိခင်ဖြစ်သူမှာလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရန်ပြုမည်စိုးရိမ်သောကြောင့် အမှုဖွင့်မတိုင်ကြားသလို တောင်ယာထဲသို့လည်း မသွားရဲဘဲ အမှတ် (၈) ကျေးရွာတွင် နေထိုင်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အမှုဖွင့်မတိုင်ကြားပါက ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ယခုဖြစ်စဉ်မျိုး ထပ်မံကျူးလွန်လာနိုင်သောကြောင့် ဇွန်၂၇ ရက်တွင် မောတောင်နယ်မြေ ရဲစခန်းသို့လာရောက် တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ဦးကျော်သန်း (၃၅) နှစ်၊ အမှတ် (၈) ကျေးရွာနေသူအား ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ ရဲအုပ်ဝင်းလှိုင်က အမှုဖွင့်ပေးခဲ့ပြီး မောတောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှ (ပ)၁၁/၂၀၁၈၊ အမှုကြီးအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၁၈) ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် ပထွေးဖြစ်သူက ရှစ်နှစ်အရွယ် ဒုတိယတန်းကျောင်းသူအား အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူအား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သဖြင့် မိခင်က အမှုဖွင့်
ဖားကန့်မြို့နယ် တာမခန်ကျေးရွာတွင် ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးရင်းဖြစ်သူအား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သဖြင့် မိခင်ဖြစ်သူက ဥပဒေအရ အရေးယူပေးရန် ရဲစခန်းသို့ အမှုဖွင့် တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မိခင်ဖြစ်သူက တရားလိုပြုလုပ်ကာ ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် တာမခန်နယ်မြေရဲစခန်းသို့ အမှုဖွင့် တိုင်တန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ရဲမှတ်တမ်းများအရ ဖြစ်စဉ်မှာ တရားလိုဖြစ်သူ ဒေါ် – – – – သည် ဧပြီ ၁၉ ရက် နံနက် ၁ နာရီခွဲက သမီးဖြစ်သူအိပ်သည့် အခန်းမှ ပျဉ်နံရံအား ထုသံကြား၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုရာ သမီးဖြစ်သူမ- – – – ၊ (၁၅ နှစ်) အိပ်နေသည့် ခြင်ထောင်ထဲတွင် သမီးဖြစ်သူထိုင်နေပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူမှာလည်း အတွင်းခံဘောင်းဘီဖြင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်နေသည်ကို တွေ့ရှိရသဖြင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား သမီးဖြစ်သူ၏ ခြင်ထောင်ထဲမှ ထွက်သွားရန် ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သမီးဖြစ်သူအား မေးမြန်းရာ သမီးဖြစ် သူမ —— မှာ ၎င်းခြင်ထောင်ထဲတွင် အိပ်ပျော်နေစဉ် ဖခင်ဖြစ်သူမှာ ခြင်ထောင်ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာပြီး မဖွယ်မရာများ ပြုလုပ်ကာ ကာမရယူရန် အားထုတ်ခဲ့သဖြင့်မ – – – – က ၎င်းမိခင်နိုးအောင် အိပ်ခန်းနံရံ ပျဉ်ချပ်အား လက်ဖြင့်ထုကာ အချက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခင်ကလည်း ထိုသို့ အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ဖခင်ဖြစ်သူက ကြံစည်ခဲ့ဖူးပြီး ဧပြီ ၁၀ ရက် နံနက် ၃ နာရီခွဲခန့်က မိခင်ဖြစ်သူမှာ ရပ်ကွက် ဆွမ်းအလှည့်ကျသဖြင့် နေအိမ်တွင် မရှိခိုက် သမီးဖြစ်သူမ – – – – အား ဖခင်ဖြစ်သူက အိပ်ခန်းထဲတွင် ကလေးလာစောင့်အိပ်ရန် ခေါ်ပြီး အတင်းဆွဲဖက်ကာ သမီးဖြစ်သူ မ – – – – အား ယခုဖြစ်စဉ်အတိုင်းပင် ပြုမူခဲ့ရာ မ- – – – မှာ ရုန်းကန်၍ နေအိမ်ရှေ့သို့ ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူမှုရေးအရ လင်မယားကွဲခြင်းသာ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထို့နောက်တွင်မှ ဆွေးမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းများနှင့် ညှိနှိုင်းကာ တရားခံမှ နောက်ပိုင်းတွင်လည်း ထပ်မံကြိုးစားမည်စိုးသဖြင့် ဧပြီ ၂၆ ရက်တွင် သမီးဖြစ်သူအား အကြိမ်ကြိမ် အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြိုးစားခဲ့သူ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား ဥပဒေအရ အရေးယူပေးပါရန် ဒေါ် – – – – က တာမခန်နယ် မြေရဲစခန်းသို့ အမှုဖွင့် တိုင်တန်းခဲ့ရာ တာမခန်နယ်မြေစခန်းက (ပ)၁၂/ ၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၇၆/ ၅၁၁ ဖြင့် အမှုဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ဖခင်ဖြစ်သူက သမီးဖြစ်သူအား အဓမ္မပြုကျင့်ရန် ကြံစည်သဖြင့် မိခင်က အမှုဖွင့်
နှစ်နှစ်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူကို ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးတွင် ငါးကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး တရားလိုပြသက်သေငါးဦးအား ဆက်လက်စစ်ဆေး
မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူကို မတ် ၂၀ ရက်က ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်စဉ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် မတ္တရာမြို့နယ်တွင် အသက်နှစ်နှစ်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြိုးထက်အောင်ကို မတ် ၂၀ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆၊ ၃၀၂ တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှုအပေါ် တရားလိုပြသက်သေငါးဦးကို ဆက်လက်စစ်ဆေးခဲ့ကာ အမှုကို မတ် ၂၁ ရက် (ယနေ့) တွင် တရားလိုပြသက်သေများအား ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသက်နှစ်နှစ်နှင့် ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးက စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့သည့် မတ် ၁၂ ရက်မှစတင်ကာ အမှုရုံးချိန်းကို ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်အတွင်း၌ပင် ရုံးချိန်းသုံးချိန်း ချိန်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မတ် ၁၆ ရက်က အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားလိုအပါအ၀င် တရားလိုပြသက်သေငါးဦးတို့ကို စတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး အမှုကို မတ် ၁၉ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ရုံးချိန်းများကို ဆက်တိုက်ချိန်းဆိုထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အသက်နှစ်နှစ်နှင့် ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြိုးထက်အောင်ကို ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က မတ္တရာမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့ပြီးနောက် မတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံးသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ရာကြီးမှုအမှတ် ၃၉/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မမုဒိမ်းမှု ၃၇၆၊ လူသတ်မှု ၃၀၂ တို့ဖြင့် စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက် အမှုအား ရက်ပိုင်းအတွင်းပင် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးက ပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့ပြီး မတ် ၁၅ ရက် ရုံးချိန်းတွင် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှေ့နေပါဝါတင်ပြခဲ့ကာ အမှုကို မတ် ၁၆ ရက်တွင် စတင်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ဒီနေ့ (မတ် ၂၀ ရက်) ရုံးချိန်းမှာက တရားလိုပြသက်သေငါးဦးကို ထပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ မနက်ဖြန်လည်း ထပ်ပြီးစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ သိရတယ်။ အမှုရုံးချိန်းတွေက မတ် ၁၉ ရက်ကနေ မတ် ၂၂ ရက်အထိ ဆက်တိုက်ချိန်းဆိုထားတာ။ ရုံးချိန်းတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အမှုစစ်ဆေးတာကို အမြဲလာရောက်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်” ဟု အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် မိန်းကလေးငယ်၏ မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
မတ် ၂၀ ရက်က ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံးတွင် ချိန်းဆိုခဲ့သည့် အမှုရုံးချိန်းတွင် တရားလိုပြသက်သေငါးဦးကို မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဖက်ရှေ့နေများက စစ်ဆေးခဲ့ကြကြောင်း အမှုအား သွားရောက်နားထောင်ခဲ့ကြသူများထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါ အမှုရုံးချိန်းသို့ ကလေးငယ်၏မိသားစုဝင်များ၊ အမှုကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ လာရောက်စောင့်ကြည့် နားထောင်ခဲ့ကြသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က မတ္တရာမြို့နယ် ဥဒိန်ကျေးရွာအုပ်စု မြွေကူးတိုးဆိပ်ကျေးရွာနေ အသက်နှစ်နှစ်ကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား ၀န်စုကျေးရွာနေ ဖြိုးထက်အောင် (၂၅ နှစ်)က ကလေးငယ်အားပွေ့ချီ၍ ကျေးရွာအနီးရှိ ငှက်ပျောတောထဲတွင် အဓမ္မပြုကျင့်၍ သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ရာတွင် ကလေးငယ်၏ပါးစပ်အတွင်းသို့ ငှက်ပျောသီးများအပြည့်ထည့်၍ ကလေးငယ်မအော်ဟစ်နိုင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အခင်းဖြစ်စဉ်မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ထိုသို့ ကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြိုးထက်အောင်ကို ရေနံ့သာ နယ်မြေရဲစခန်းက (ပ)၂၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in CrimeTagged သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု, အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on နှစ်နှစ်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူကို ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးတွင် ငါးကြိမ်မြောက်ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး တရားလိုပြသက်သေငါးဦးအား ဆက်လက်စစ်ဆေး
နှစ်နှစ်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးအား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်သူကို ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံး၌ ပုဒ်မနှစ်ခုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှုတွင် ရှေ့နေပါဝါတင်ပြခဲ့ပြီး အမှုအား ယနေ့ ဆက်လက်စစ်ဆေးမည်
Posted on March 15, 2018 March 16, 2018 by Eleven Media Group
မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြိုးထက်အောင်ကို မတ် ၁၅ ရက်က ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်စဉ်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ မတ္တရာမြို့နယ်တွင် အသက်နှစ်နှစ် ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြိုးထက်အောင်ကို မတ် ၁၅ ရက် နံနက်ပိုင်းက ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆၊ ၃၀၂ တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှုကို တရားခံဘက်မှ ရှေ့နေပါဝါတင်ပြခဲ့ကာ အမှုကို မတ် ၁၆ ရက်(ယနေ့)တွင် ဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးမှ သိရသည်။
အသက် နှစ်နှစ်နှင့် ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံးက စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့သည့် မတ် ၁၂ ရက်မှ စတင်ကာ အမှုရုံးချိန်းကို ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်အတွင်း၌ပင် ရုံးချိန်းသုံးချိန်း ချိန်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယနေ့ မတ် ၁၆ ရက်တွင် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားလိုဖြစ်သူကို စတင်စစ်ဆေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
အသက် နှစ်နှစ်နှင့်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြိုးထက်အောင်ကို ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က မတ္တရာမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ် ရမန်ယူခဲ့ပြီးနောက် မတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံးသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာ ရာကြီးမှုအမှတ် ၃၉/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ မုဒိမ်းမှု ၃၇၆၊ လူသတ်မှု ၃၀၂ တို့ဖြင့် စတင်တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက် အမှုအား ရက်ပိုင်းအတွင်းပင် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံးက ပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့ပြီး မတ် ၁၅ ရက် ရုံးချိန်းတွင် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ရှေ့နေပါဝါ တင်ပြခဲ့ကာ အမှုကို မတ် ၁၆ ရက်သို့ ထပ်မံချိန်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျွန်မကတော့ သူ့ကို သေဒဏ် ပြစ်ဒဏ်ပေးစေချင်တယ်။ တကယ်လို့ သေဒဏ်မချရင်တောင်မှ ကြီးမားတဲ့ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေကို ချမှတ်ပေးစေချင်တယ်။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေနဲ့ ပြန်လွတ်လာမှာကိုလည်း မလိုလားဘူး။ သူ့ရဲ့မျက်နှာကို ကျွန်မတို့ဒေသမှာ ပြန်ပြီးတော့ မမြင်ချင်တော့ဘူး။ အခုအထိ ကျွန်မ ရင်ထဲမှာ နာနေတုန်းပါ။ အရမ်းခံစားနေရတယ်။ ဒါကြောင့် အမှုကိုလည်း အမြန်ဆုံးဥပဒေနဲ့အညီ ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပေးစေချင်တယ်” ဟု အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည့် မိန်းကလေးငယ်၏ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်သက်မာစိုးက ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က မတ္တရာမြို့နယ်၊ ဥဒိန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြွေကူးတိုးဆိပ်ကျေးရွာနေ အသက်နှစ်နှစ်ကျော် အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား ၀န်စုကျေးရွာနေ အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ် ဖြိုးထက်အောင်က ကလေးငယ်အား ပွေ့ချီ၍ ကျေးရွာအနီးရှိ ငှက်ပျောတောထဲတွင် အဓမ္မပြုကျင့်၍ သတ်ဖြတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့်ရာတွင် ကလေးငယ်၏ ပါးစပ်အတွင်းသို့ ငှက်ပျောသီးများ အပြည့်ထည့်၍ ကလေးငယ်မ အော်ဟစ်နိုင်ရန်အတွက် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကလေးငယ်ကို သတ်ဖြတ်ကာ အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အခင်းဖြစ်စဉ် မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။ ထိုသို့ ကလေးငယ်ကို အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြိုးထက်အောင်ကို ရေနံ့သာနယ်မြေရဲစခန်း က (ပ)၂၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၆/၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on နှစ်နှစ်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးအား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်သူကို ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံး၌ ပုဒ်မနှစ်ခုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှုတွင် ရှေ့နေပါဝါတင်ပြခဲ့ပြီး အမှုအား ယနေ့ ဆက်လက်စစ်ဆေးမည်
နှစ်နှစ်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးအား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်သူကို ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးတွင် ပုဒ်မနှစ်ခုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားမှု ယနေ့ စတင်စစ်ဆေးမည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် မတ္တရာမြို့နယ်တွင် နှစ်နှစ်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့် သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ ဖြိုးထက်အောင်ကို မတ် ၁၅ ရက် (ယနေ့) တွင် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးတွင် ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆၊ ၃၀၂ တို့ဖြင့် တရားစွဲဆိုထားမှုကို စတင်စစ်ဆေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးမှ စုံစမ်းသိရသည်။
ဖြိုးထက်အောင်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်က မတ္တရာမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ရမန်ယူခဲ့ပြီးနောက် မတ် ၁၂ ရက်တွင် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးသို့ ပြောင်းရွှေ့ကာစတင် တရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးနောက် အမှုအား ရက်ပိုင်းအတွင်းပင် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးက ပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့ပြီး ယနေ့မတ် ၁၅ ရက်တွင် အမှုအား စတင်စစ်ဆေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးမှ စုံစမ်းသိရသည်။
“တရားခံကိုစွဲဆိုထားတဲ့ ပုဒ်မတွေက ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၇၆၊ ၃၀၂ တို့နဲ့ တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ သူ့ကိုစွဲဆိုထားတဲ့ပုဒ်မတွေက သေဒဏ်ထိုက်စေတဲ့ ဥပဒေပုဒ်မတွေနဲ့ စွဲဆိုထားတာပါ။ တရားခံဘက်က ရှေ့နေမငှားရမ်းနိုင်တဲ့အတွက် တရားရုံးကနေပဲ နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့ ရှေ့နေငှားရမ်းပေးနိုင်ဖို့ အတွက် ရှေ့နေချုပ်ရုံးကို တင်ပြထားပါတယ်။ အမှုအတွက် တရားလိုပြသက်သေ တင်ပြထားတာက စုစုပေါင်း ၂၄ ဦးပါ။ မတ် ၁၅ ရက်ရုံးချိန်းမှာ ရှေ့နေပါဝါတင်ပြပြီးရင် အမှုကို စတင်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှုကိုလည်း ဥပဒေနဲ့အညီ မှန်မှန်နဲ့အမြန်ဆုံး စီရင်ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” ဟု ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးမှ ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး (၁) ဒေါ်ဌေးဌေးမော်က မတ် ၁၂ ရက်ရုံးချိန်းက ပြောကြားသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက်က မတ္တရာမြို့နယ် ဥဒိန်ကျေးရွာအုပ်စု မြွေကူးတိုးဆိပ်ကျေးရွာနေ နှစ်နှစ်ကျော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား ၀န်စုကျေးရွာနေ ဖြိုးထက်အောင် (၂၅ နှစ်) က ကလေးငယ်အားပွေ့ချီ၍ ကျေးရွာအနီးရှိ ငှက်ပျောတောထဲတွင် အဓမ္မပြုကျင့်၍ သတ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted in CrimeTagged သက်ငယ်မုဒိမ်းမှု, အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on နှစ်နှစ်ငါးလကျော်အရွယ် မိန်းကလေးအား အဓမ္မပြုကျင့်သတ်ဖြတ်သူကို ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်တရားရုံးတွင် ပုဒ်မနှစ်ခုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားမှု ယနေ့ စတင်စစ်ဆေးမည်
လွိုင်ကော်မြို့ ဒေါဥခူရပ်ကွက်ရှိ အကျဉ်းထောင်တိုးချဲ့ဆောင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်သော အလုပ်သမားတစ်ဦးက နှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအား အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
လွိုင်ကော်မြို့ ဒေါဥခူရပ်ကွက်ရှိ အကျဉ်းထောင်တိုးချဲ့ဆောင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်သော အလုပ်သမားတစ်ဦးက အခန်းနီးချင်း နှစ်နှစ်ရွယ် မိန်းကလေးငယ်အား အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားသောကြောင့် အရေးယူဆောင်ရွက်နေကြောင်း ကလေး၏ မိဘများထံမှ သိရသည် ။
ဇန်န၀ါရီ ၁၁ ရက် ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် နေအိမ်တန်းလျားရှေ့တွင် မိခင်ဖြစ်သူ ထမင်းချက်ပြုတ်နေစဉ် မိခင်၏ ဘေးနားတွင် ရပ်နေသော ကလေးငယ်အား ကျူးလွန်သူ မြင့်ခိုင် အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်က ကလေးကိုချီပိုး၍ နှစ်ခန်းကျော်ရှိ ၎င်း၏အခန်းသို့ခေါ်သွားကြောင်း၊ မိခင်ဖြစ်သူမှာ ဈေးဝယ်သွားရာမှအပြန် မြင့်ခိုင်၏ အခန်းမှ ကလေးငိုသံကြားသဖြင့် သွားရောက်ရာမှ ကလေးငယ်၏ ၀တ်ဆင်ထားသော ဘောင်းဘီတွင် သွေးနှင့်မစင်များကို တွေ့ရှိရကြောင်း သိရသည် ။
“ထမင်းအိုးတည်နေတာ အဲ့ကောင်က ဒီနားလေးမှာ လာနေတာ။ လာတဲ့ခါကျတော့ သမီးလာတဲ့ ယောက်ျားလေးလား ကောင်မလေးလားတဲ့။ သမီးလေးလို့။ ဟုတ်လားတဲ့။ ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ ပြောပြီးတော့ ။ အဲ့ကောင်လေးကလည်း သမီးတို့ ရွာထဲချင်းပဲ။ သမီးတဲ့ ဘဘဆီလိုက်မလားတဲ့ ။ ကလေးကလည်းလိုက်ချင်လို့ စိတ်ယိုင်သွားလိုက်တာပေါ့ လိုက်ချင်တော့။ သမီးကလည်း ထမင်းအိုးလေးငှဲ့ပြီးလို့ နှပ်ထားလိုက်တာ။ သူက ခေါ်ချသွားလိုက်တာ။ မုန့်ဆိုင်ဘက်ကနေ ပတ်ခေါ်သွားတာ။ မုန့်ဝယ်ပြီးတော့ ဟိုးဘက်ကနေ ပတ်သွားတာ မသိလိုက်ဘူး ။ ကလေးက မတရားလေး အော်ချတော့ ကလေးဘာဖြစ်တယ်မသိဘူးပေါ့ ။ ထမင်အိုးချထားပြီး ပြေးကြည့်လိုက်တော့။ နှစ်ခါလောက်အော်တာ။ သမီးဘာဖြစ်တာတုန်းဆိုတော့ အဲ့ကောင်လေးကို လက်ညှိုးထိုးပြတာ။ သူက လုပ်တာတဲ့” ဟု မိခင်ဖြစ်သူက ပြောကြားသည် ။
အကျဉ်းဦးစီးဌာန တိုးချဲ့ဆောင်ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် မလှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများမှ အလုပ်သမားများခေါ်ယူ၍ လာရောက်လုပ်ကိုင်နေပြီး ပြစ်မှုကျူးလွန်သူနှင့် ကလေးငယ်မိဘတို့မှာ ရွာနီးချင်းများ ဖြစ်သော်လည်း အသိမိတ်ဆွေများ မဟုတ်ကြောင်း။ ကျူးလွန်သူမှာ အရက်သေစာ သောက်စားမူးယစ်ပြီး ကာမဆန္ဒစိတ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုထားသည်ဟုလည်း သိရသည် ။
အမှုကို လွိုင်ကော်မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးဝင်းဌေးက စစ်ဆေးပြီး တရားခံအား ဖမ်းဆီးအရေးယူ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းနှင့် ကလေးငယ်မှာ ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက် ညနေပိုင်းတွင် လွိုင်ကော်ဆေးရုံမှ ဆေးစစ်ကုသမှုခံယူပြီး နေအိမ်တန်းလျားတွင် မိဘများနှင့်အတူ ပြန်လည်နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည် ။
Posted in NewsTagged အဓမ္မပြုကျင့်မှုLeaveaComment on လွိုင်ကော်မြို့ ဒေါဥခူရပ်ကွက်ရှိ အကျဉ်းထောင်တိုးချဲ့ဆောင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်သော အလုပ်သမားတစ်ဦးက နှစ်နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးအား အဓမ္မပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား